तपाई बिश्वास गर्नुहुन्छ पुनर्जन्मको बारेमा ? हेरौँ भिडियो – Complete Nepali News Portal
तपाई बिश्वास गर्नुहुन्छ पुनर्जन्मको बारेमा ? हेरौँ भिडियो
April 21, 2017	14,802 Views Share
संसारमा धेरै मानिसहरुले सोच्ने गर्छन्,मृत्युपछि हाम्रो शरिर कता जान्छ ? के हामी शुन्यमा बिलाउँछौ ? मृत्युपछि हामी स्वर्ग-नर्क कता जान्छौ ?
संसारमा बेला-बेलामा केहि आश्चर्यजनक मानिसहरु पनि फेला परेका छन्, जो आफ्नो पुनर्जन्म भएको दाबी गर्छन्। यति मात्रै होइन उनीहरुले आफ्नो अघिल्लो जुनीको बारेमा इति बृतान्त सुनाउँने गर्छन् ।
संसारका थुप्रै धर्महरुले पुनर्जन्म हुन्छ भनेका छन्।
पुनर्जन्मको बारेमा भिडियोमा हेरौँ